Hab nololeedka caafimaadka leh: maxay yihiin iyo tilmaamaha ay tahay inaad raacdo | Ragga Stylish
Hab nololeed caafimaad leh
Shabakadaha bulshada waxay si joogto ah noogu duqeynayaan xog-ururin, iyo fiidiyowyo iyo sawirro ku saabsan qaab nololeed caafimaad leh. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad badan oo aan wali si fiican u garanayn waxaani yahay. Hab-nololeedka caafimaadka qaba waa istiraatiijiyad caalami ah oo u adeegta abuurista isbeddel lagu daryeelayo caafimaadka waxaana lagu qaabeeyaa ka hortagga cudurrada iyo kororka caafimaadkeenna.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa qaab-nololeedka caafimaadka qaba ee aan u baahannahay si aan u fiicnaanno ugana hortegno bilowga cudurrada.
1 Waa maxay qaab nololeed caafimaad qaba
2 Astaamaha qaab nololeedka caafimaadka leh
3 Aasaaska qaab nololeedka caafimaadka leh
3.1 Cunto caafimaad leh
3.2 Layli jimicsi
3.3 Si fiican u seexo
3.4 Nadaafad habboon
3.6 Ka fogow tubaakada
3.7 Cadaadiska oo yaraada
Waa maxay qaab nololeed caafimaad qaba
Istaraatiijiyaddan isku dayaysa inay kor u qaaddo caafimaadka waxay bilaabatay 2004 waxayna sii faafisay aad iyo aad. Balaadhinta shabakadaha bulshada aad ayey u fududahay in la awoodo in la daabaco waxqabadyo, xeelado iyo nafaqeyn la raaco si loo gaaro qaab-nololeedyadan caafimaad qaba Isbeddelkan ayaa ka dhashay qoraal ka soo baxay hay'adda caafimaadka adduunka hagaajiyo dhammaan arrimaha halista ah ee nagu hanjabaya cuntada iyo qaab-nololeedka deggan.
Waxa ugu horreeya ee la falanqeeyo waa cuntada aan hadda haysanno. Xawaaraha nolosha aadanaha wuxuu ku kordhay heerar aad u fara badan. Waa inaan ka faa'iideysanno waqtigeenna si aan wax u soo saar u yeelano maadaama waqtigeenna intiisa badan aan ku qaadannay shaqo ama safar. Cunnooyinka degdega ah iyo cuntooyinka aadka loo farsameeyay ayaa si isa soo taraysa ugu badanaya cuntada celceliska muwaadinka. Waxaa jira daraasado muujinaya in isticmaalka ilaa 4 daroogo ah oo aad loo farsameeyay dhamaadka maalinta waxay soo dedejin kartaa dhimashada 62%.
Dhinaca kale, waxaa jira shaqooyin badan oo fadhi ku dirir ah iyo laxanka nolosha oo deggan. In badan oo tikniyoolajiyad iyo raaxo leh aan haysanno, ayaa yaraanaysa dhaqaaqeenna. Waxaan ku tagi karnaa meel kasta gaadiidka gawaarida. Gurigeenna, waxaan ku leenahay waxyaabo badan oo jeediya sida taleefannada gacanta, telefishinnada iyo kombuyuutarrada, iyo kuwo kale. Way fududaanaysaa inaad noolaato adigoon dhaqaaqin oo aanad dhaqaaqin kaligood. Waxaas oo dhami waxay ku dhacayaan caafimaadka jidhkeenna.
Astaamaha qaab nololeedka caafimaadka leh
Hab-nololeedyadani waxay tixgeliyaan jiritaanka arrimo halis oo kala duwan iyo arrimo naga caawiya ilaalinta caafimaadkeenna. Tan macnaheedu waxa weeye, marka hore, waa inay bulshada si wanaagsan u tixgeliyaan. Waxaa jira dad si xad dhaaf ah ugu waalan mowduuca qaab nololeed caafimaad qaba. Qaar kale, si kastaba ha ahaatee, dheg jalaq ha u siin.
Waa geedi socod firfircoon oo aan ka koobnayn oo keliya ficillo iyo dabeecado shaqsiyeed, laakiin sidoo kale ka kooban ficillo bulsheed. Hab-nololeedyadan waxaa loo tixgeliyey inay yihiin arrimo go'aaminaya iyo isirrada xaaladaha ee xaaladda caafimaad ee dadweynaha guud.
Ka dib, waxa lagu qeexay qaab nololeed caafimaad leh waa ficiladaas uu qofku si joogto ah u sameeyo nolol maalmeedkiisa kuwaas oo gacan ka geysta ilaalinta caafimaadka wanaagsan iyo yareynta halista ka timaadda cudurada. Waa muhiim in la baro caadooyinkan caafimaadka leh laga soo bilaabo da 'yarta si qaar ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee nolosha loo qaato. Si lama filaan ah u beddelashada dabeecadda qofka ee nolol maalmeedkiisa waxay noqon kartaa wax aad u adag. Xitaa way ka sii dhib badan tahay haddii aan ka hadlayno qof weyn oo leh qaddar cayiman oo caadooyin soo jireen ah tan iyo markii uu yaraa.
Qaadashada aasaasiyadan caafimaad waxaan kor u qaadi karnaa tayada nolosha qofka. Dhanka kale, waxaan ka hadlaynaa waxqabad dejinta. Taasi waa, qofka leh qaab nololeed caafimaad qaba ayaa shardi kara kuwa kale inay iyaguna yeeshaan. Waxaan u baranay inaan aragno sida dad badani u bartaan caadooyinka qaar ayagoo fiirinaya kuwa kale. Xaaladdan oo kale, waa waxtar guud ahaan bulshada maadaama qof walba uu u muuqanayo wax wanaagsan.
Waxaa la muujiyey in carruurta waalidkood iyo xubnaha kale ee qoyskoodu ku nool yihiin nolol wanaagsan ay leeyihiin saadaalin weyn oo ay ku helayaan iyaga waqti ka badan inay diidaan noocyada kale ee dabeecadaha waxyeellada leh. Tani waa sababta ka dhigaysa mid si weyn loogu taliyay in lagu soo bandhigo fikradahan nolosha ilmaha laga bilaabo da 'yar. Sidan oo kale waxaan u aragnaa inay tahay wax aysan ku adkaan inay wax ka beddelaan.
Aasaaska qaab nololeedka caafimaadka leh
Si loo helo nolol caafimaad leh oo wanaagsan waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhaqmo qaar ka mid ah caadooyinka nolol maalmeedkeena. Caadooyinka la xiriira nafaqada iyo ka hortagga cudurrada iyo jimicsiga labadaba. Waxaan tilmaameynaa qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaan sameyno oo aan si kooban u sharaxno:
Joogtee cunto caafimaad leh, dheellitiran oo kugu filan iyadoo ku xiran da'da iyo xaaladda. Tani muhiimad weyn ayey u leedahay Jirka sifiican ugu hay nafaqada sida loogu baahan yahay. Nafaqada cayaartooydu lama mid aha tan qofka fadhiga badan. Waa inaad la kulantaa qaababka qaarkood ee cunnada oo aad hubisaa in jidhku helo dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah si uu caafimaad u ahaado. Cunto wanaagsan ayaa sidoo kale ka hortagta cudurada kala duwan.
Ma jiraan wax ka muhiimsan firfircoonida maalinteenna maalin. Waxay horey u noqon kartaa qof, cuntada dhabta ah marwalba inaad sifiican uga taxadarto qadarka fitamiinada, macdanta iyo nafaqeeyayaasha kale ee aad cunaysid, in hadaadan sameynin jimicsi jireed aanad kafiicnaan doonin. Saarista labada daraf: waa qof aan sameyn jimicsi laakiin si wanaagsan wax u cuna. Dhanka kale, qofka cunida aadka u xun laakiin jimicsi badan sameeya kuna sii firfircoon nolol maalmeedkiisa. Muddo-dheer, shakhsiyaadka labaad waxay yeelan doonaan caafimaad badan.
Si fiican u seexo
Nasashadu waa shayga aasaasiga ah ee looga bogsan karo labada jimicsi iyo hawl maalmeedkeenna caadiga ah oo aan u yareynno isku buuqa.
Casharka wuxuu muhiim u yahay kahortaga cudurada bakteeriyada iyo virus-yada.
Qiyaas wanaagsan oo qorrax maalinle ah waxay naga caawineysaa inaan cunno fitamiin D-ga aan ubaahanahay.
Ka fogow tubaakada
Tubaakada waxaa ku jira in ka badan 70 kansarroodiyaal ah.
Cadaadiska oo yaraada
Cadaadisku waa mid ka mid ah arrimaha nafsaaniga ah ee inta badan baabiiya caafimaadka dadka. Baro sidaad u xakamayso abaabulka maalinlahaaga waxaadna arki doontaa in walaacaagu yaraanayo tartiib tartiib.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkaan aad waxbadan ka baran karto qaab nololeedka caafimaadka qaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Hab nololeed caafimaad leh